▪️ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း ဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါ ၊ Delivery လာပို့တဲ့အခါ၊ တစုံတခု ပြုတ်ကျသွားလို့ ကောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ၊ ကိုယ်သွားလိုရာ လိုက်ပို့တဲ့ တက္ကစီဦးလေးကြီးကို ကားပေါ်က ဆင်းတဲ့အခါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြောဖြစ်မယ်ပေါ့။ ▪️သူများတွေ ဆီကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုး မရေမတွက်နိုင်အောင် ကြားခဲ့ဖူးမှာပါ။ ဒီလိုဆို စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော ဘယ်နှကြိမ် ဘယ်နှခါ လောက်များ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောခဲ့ဖူးလဲ ?
▪️ကျွန်တော် အများစု ဖြစ်ဖူးကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဥမမာ Group Meeting တွေလို လူအများကြားမှာ ဒီလို လုပ်လိုက် ပြောလိုက်ရင် လူတွေ ဘယ်လိုများ မြင်မလဲ ? ဆိုတဲ့ အတွေးက အရင်ဆုံး ကိုယ့်ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတတ်တာမျိုးပေါ့။ ▪️ကိုယ်ပြောမယ့် မေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာထက် လူတွေက ဘယ်လိုမြင်မလဲ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမျိုး ကို အရင်တွေးတောပူပန်နေရတာမျိးပေါ့။ ▪️ဆိုတော့ အများအမြင်နဲ့ ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှုနေမှာလဲ? ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ဘာကြောင့်များ လူအများအမြင်ပေါ်လိုက်ပြီး တံဆိပ်နှိပ်မှာလဲ ?
🔹Emerson က ပြောဖူးတယ်။ ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာ ပျော်နေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ အသုံးဝင်ဖို့၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိဖို့၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိဖို့နဲ့ အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်ကို သိမြင်ပြီး နေတတ်ဖို့ပဲ” တဲ့။ 🔹ဒီ Quote ကြီးဖတ်လိုက်ရင်တော့ ဘဝမှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီး နဲ့ အကြီးကြီတွေလို့ ထင်ကောင်းထင်သွားလိမ့်မယ်ဗျ။ ဘဝကြီးမှာ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့။
Life Lessons You Can Learn During Covid 19 Outbreak
▪️ရောဂါပိုးပြန့်ပွားချင်းမှု ကာကွယ်ဖို့ Stay Home Save Lives ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို ဆွဲကိုင်လို့ ကျောင်းတွေ ပိတ်ရတယ် ၊ Work from Home တွေ ဖြစ်ကုန်တယ် စသဖြင့်ပေါ့။ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေကို အားလုံးအတူ ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ ▪️ဒီလို ကပ်ရောဂါ အခြေအနေ ရောက်တော့ အရင်က မကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ အများစုလည်း အရင်က မတွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေးတွေ၊ မရဖြစ်လိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ သင်ခန်းစာတွေလည်း များစွာ ရလာတယ်။ ဆိုတော့ ဒီလို အခြေအနေကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ အဆိုးထဲအကောင်းဆိုသလို ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေ သင်ယူလိုက်ရလဲ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
▪️ နေ့တိုင်းလိုလို အချိန်တိုင်းလိုလို ကျွန်တော်တို့နဲ့ ထိတွေ့နေတဲ့ Facebook မှာ ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်အလက်တွေ များစွာ ရှိလို့နေပါသေးတယ်။ ▪️ ဒီနေ့မှာတော့ အားလုံး ဗဟုသုတ ရဖွယ် စိတ်ဝင်စားစရာ Facebook အကြောင်းအရာလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျ။
🔸လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ သာမန်ဆိုပေမယ့် ရုတ်တရက် အိမ်မှာပဲ အလုပ်တာဝန်တွေကို ရုံးချိန်အတိုင်း လုပ်ဖို့ ဆိုတာကျ ကျွန်တော်တို့အတွက် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်လို့နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာလို အာရုံစိုက်လို့ မရတာမျိုး၊ အလုပ်တွေ မပြီးမစီးဖြစ်နေတာမျိုး၊ တနေကုန် ထိုင် အလုပ်လုပ်နေပေမယ့် ရုံးမှာထက် အလုပ်တွေ ပိုများပြီး စုပုံနေမိတာမျိုးတွေ ကြုံလာရမှာပါ။ 🔸 ပြောရမယ်ဆိုရင် work from home ရတာ ဘယ်လိုမှ Productive မဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ ဒီတော့ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာအတိုင်း Productive ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ကြမလဲ ? နှစ်မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးဗျ။